जीवन भनूँ नै, फगत् यात्राहरु त हुन् - Kavre Times Weekly | Kavre Times Weekly
जीवन भनूँ नै, फगत् यात्राहरु त हुन्
प्रकाशित मिती : शनिबार, भदौ १७, २०७४ by admin · Comments
प्रकाशित मिति: २०७४-०५-१३
जीवन भन्नु नै त यात्रा हो; यात्रामा रमाइरहेछु
यात्रा भोग्नु नै जीवन त हो; यात्रामा आइरहेछु
यात्रामा निस्कन नसक्ने मुहारहरू कस्तो फुङ परेको –
कर्मशीलता ने जीवन त हो; म यात्रामा भुलिरहेछु ।
यात्रा गरेरमात्र हुँदैन; यात्रामा जीवनको सौन्दर्य खुलेको हुनुपर्छ । जीवनलाई सौन्दर्यमय बनाउन सुगम तथा दुर्गम धेरै खालका यात्राहरू गर्नुपर्छ । यात्रामा लाग्दा आफूभित्रको चेतनाले सुमार्ग रोज्ने कार्य हुनुपर्छ । धेरै खालका कुराहरू र कार्यहरूको तालमेलबाट गरेको यात्रा फलदायी हुन्छ । अन्यथा यात्राको नाममा हुने अनर्थ यात्राहरूको अर्थ बेअर्थको हुने डर हुन्छ । रूप, रङ्ग, लवाईखुवाई र बोली–वचनबाट मात्र तपाईंको परिचय नाप्न गा¥हो हुन्छ । परिचयहरू खुल्न र खुलाउन व्यवहार एउटा कसी भएकै कारणले मानिसका कार्यहरू हेरेर उनीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने चलन चलेको हो । यात्रा भनेको चेतना र भावनामा बाँच्छ । तपाईं कस्तो यात्रामा रमाउनु हुन्छ; त्यही यात्रामार्फत् तपाईंको परिचय खुल्दै जान्छन् । जीवन्तताका लागि यात्रा भनेको सत्य हो । जिउँदोपनको अर्थ र प्रमाण हो – यात्रा । यात्रा नहुँदा र यात्रा गर्न नसक्दाका वस्तु–तथ्यहरू अनाकर्षक मात्र हुने होइनन् अर्थहीन नै हुन्छन् । अर्थात् मृत्युभित्र लुकेको वास्तविकताको अनर्थ नरहे जस्तो पो हुँदोरहेछ । जीवन भनेको त्यसैले यात्रा नै हो; जीवनको सर्वोत्कृष्ट स्वर पनि यात्रा नै हो । शब्दलाई जेसुकै भनेर अथ्र्याउन सकिन्छ तर म भन्न रूचाइरहन्छु – ‘यात्रा भनेको सबैका लागि आफू हुनुको प्रमाण हो ।’ यात्रा नहुँदाको जीवनको सार्थकता कुनै अर्थमा पनि नहुने भएकैले यात्रामा रमाउनेहरूले विजय प्राप्त गर्छन् । तर यात्राको अर्थ बुझ्नुपर्छ । यात्रा भनेको प्रगति र नयाँ उन्नतिका लागि सुकार्यहरू गर्नु हो । असत् सोच्नेहरूको यात्रा, खराब मन हुनेहरूको यात्रा र दुष्ट्याइँ रोप्नेहरूको यात्रालाई कसरी यात्रा हो भन्न सकिन्छ ? कुनै पनि सुखद यात्राका लागि सबैमा यही हार्दिकता दिन रूचाइरहेछु ।
नदी बग्दाको स्वरूपभित्र राखेर पानीलाई छाम्दा पो थाहा हुन्छ – यात्रामा बगिरहँदाको पानी कस्तो कञ्चन र माधुर्यपूर्ण हुन्छन् ? के तपाईंले सुन्नुभएको छैन; कान थापेर सुनौं पानीका बूँदहरूको ऊर्जाशील आवाजहरू ! फूर्ति नै बेगल, हेरिरहूँजस्तो उनको पन – छङ्छङ् कति मीठो बोली, कस्तो सुन्दर ढङ्गको हिंडाई । यही त हो जीवन – मनमनमा राखेर नदीको यात्रामा आफूलाई समेटेर नदीजस्तै दौडिरहन मन लाग्छ । सौन्दर्य भनेको नै यात्रामा खुल्ने हो । फूलहरू फुलिंदिंदा कति मनमोहक हुँदारहेछन् – फूलहरू फुलिदिनु नै उनीहरूको मौनभाषामा जीवन हो । भमराहरू रस सुँघ्न, आफ्नोपन अभिव्यक्ति गर्न फूलहरू वरिपरि गनगन गर्छन् । यहीँ गनगन त भमराहरूको जीवन–यात्रा हो । सबै प्राकृतिक वस्तुहरू, जनावरहरू, पन्छीहरू आ–आफ्नो यात्रामा आफूलाई समर्पित तुल्याएर आफूलाई देखाइरहेछन – यही यात्राहरू नै सबै पक्षका जीवनहरू हुन् ।
यात्राहरू फरकफक ढङ्गका हुँदारहेछन् । कसैको यात्रामा सुखद अनुभूतिहरू हुन्छन् त कसैको यात्रामा दुःखद सन्दर्भहरू टाँसिन्छन् । यस अर्थमा भन्न सकिन्छ; यात्राहरू सुखद पनि हुन्छन्, त्यस्तै दुःखद पनि हुन्छन् । यात्राहरू सुन्दर पनि हुन्छन्; असुन्दर पनि हुने गर्छन् । संसार सुन्दर हुनुमा सुन्दर यात्रीहरूको सुन्दर यात्रा–मर्महरू नै कारण हुन् । बुद्धले नेपालमात्र भनेनन्; मान्छेमात्रकै भलाई सोचेर मान्छेकै यात्रामा लागे । विश्व जगत्मा बुद्ध फैलिंदै गयो । नेपाललाई बुद्धकै यात्राले नै न हो संसारमा चिनाइदिएको ! नत्र कसरी चिन्छन् नेपाललाई संसारमा ! बुद्धकै देशका रूपमा चिन्छन् नेपाललाई विश्वमा । दक्षिण अफ्रिकाका ‘नेल्सन मण्डेला’, भारतका ‘महात्मा गान्धी’, चीनका ‘माओत्सेतुङ’, भियतनामका ‘होचिमिन्ह’, बेलायतका ‘शेक्सपियर’, फ्रान्सका ‘रूसो’, रूसका ‘टाल्सटाय’, जर्मनका ‘कार्लमाक्र्स’, ग्रीसका ‘सुकरात’, अमेरिकाका ‘लिङ्कन’ आदिहरू सद्यात्राका सुपात्रहरू हुन् । मान्छेको लागि चेतना सबैभन्दा मर्मशील भावनाहरू हुन् । मान्छेलाई जातसँग, पैसासँग, शक्तिसँगमात्र दाँजिहेर्दा हामी भ्रममा बाँधिन्छौं । जातभात केही होइन; तपाईंसँग मूल कुरो त चेतना हो । पैसा सबैथोक होइन, चाहिने त मान्छेका लागि मर्मभित्रको सद्भाव हो । शक्ति सधैं रहँदैन तर तपाईंभित्र रहेको चेतना मान्छेकै लागि टनिक हुन् । हेलेन केलेर, मदर टेरेसा, पारिजात, झमककुमारीहरू इतिहासका कालखण्डहरूभित्र जन्मिएका हृदयशक्ति र चेतनाशक्ति बलियो भएका मान्छेहरू हुन् । चेतनाका अक्षर–बिम्बहरू भावनाबाट मुखरित हुन्छन् । के म भावनासँग हराएर बाँच्न सक्छु ? के म चेतनाहीन भई मनपरी बाँच्न सोच्न सक्छु । मैले जस्तै गरी तपाईंहरू पनि सोच्दै हुनुहुन्छ होला ? सोच्न सकेरै मान्छेहरू बलिया देखिएका हुन् । त्यसैले भन्नुपर्दा; यात्रा भनेको सोचेरै गर्ने हो । यात्रा भनेकै मान्छेकै मन बलियो तुल्याइदिन गर्ने हो । आफैंमात्र बाँच्ने सोच त जनावरहरू पनि सोच्दा हुन् । मान्छेहरू अवश्य जनावरहरू भन्दा फरक छन् । फरक देखिंदैन भन्ने त्यस्ता मान्छेहरू जनावरहरू नै हुन् ।
जसले आफूलाई जित्न सक्छ उसलाई कसैले जित्न सक्दैन । आफूलाई जित्दै त गर्ने हुन् यात्राहरू । यात्रामा लाग्दा आफूलाई जित्न नसक्नेहरू थुप्रैले हारेका छन् । मान्छे सृष्टि भएदेखिका इतिहास केलाई हेर्दा मान्छेहरूका यात्राहरू इतिहासमा छाम्न सकिन्छ – यही इतिहासबाट त सिक्ने हुन् मान्छेले यात्राका कुराहरू । आफू बच्न पनि यात्रा गर्छन्; त्यसैगरी अरूलाई बचाउन पनि यात्रा गर्छन् । धेरैका लागि यात्रा गर्नेहरू धेरैका लागि बाँँच्छन्, थोरैका लागि यात्रा गर्नेहरू थोरैका आँँखामा बाँच्छन् । आफ्नै लागि यात्रा गर्नेहरू आफूभित्र मात्र बाँच्छन् । यही यात्राका प्रसङ्गहरूमा मान्छेहरू आ–आफ्ना धूनका कुराहरू गर्छन् । … तर … यात्रा गरिरहन्छन् मान्छेहरू ।
मान्छे मात्र होइनन्
सबै–सबैहरू यात्रामा छन्
फूलहरू, पानीहरू, घामहरू
सबै–सबैहरू यात्रामा छन् ।
तर कसैको यात्राले जो कोहीलाई आनन्द छर्दछन्
कसैको यात्राले सबैलाई पीडा बाँड्छन्
यात्रा त गर्ने हो सबैले
यात्रा गरेरै बाँँच्ने हुन् जिजीविषाहरू ।
घाम उज्यालो बाँड्न निपुण छन्
त्यसैले उनी सबैको माया पाएर बाँच्न सिपालु रहे
त्यसैले त उनी सबैलाई प्रेम बाँडेर हाँस्न खोजे
उनी पनि त यात्री हुन् –
सबैले मन पराउँदै बाँचेका यात्री ।
फूल मुहारमा रङ्ग छर्केर
फूलझैं फुल्न जानेका छन्
कति मनमोहक छन् उनका मुहार–स्पर्शहरू
कसैलाई बाधा दिन नजानेका फूलहरू –
कति सुन्दर देखिएका हुन् यात्रामा ।
पानीझैं कञ्चन बूँद छर्केर
यात्रामा बगिरहन पाउँदाका पानी–मुहारहरू –
पानीलाई पानीमा राखेर
म पानीको यात्रालाई मनभरि कैद गरिरहेछु ।
वीरगन्ज महानगरको अर्धबार्षिक बजेट ४ अर्ब २२ करोड January 22, 2018
बालविवाह अन्त्य र साझा संकल्प January 22, 2018
सल्यानमा बस दुर्घटना, ४ को मृत्यु January 22, 2018
भारतले अतिक्रमण नगरेको भन्ने नापीका कर्मचारीलाई कारबाहीको माग January 22, 2018
संविधान कार्यान्वयनका लागि सबै दल मिल्नुको विकल्प छैन : नेता सिंह January 22, 2018
कांग्रेसका १८ जिल्ला सभापति हलेसीमा January 22, 2018
धनकुटामा निषेधाज्ञा हटाइयो, बन्द कायमै January 22, 2018
लागुऔषध कारोवारी पक्राउ January 22, 2018
दुर्घटना रोक्न अटो रिक्सामा स्टीकर January 22, 2018
नवराज सिलवालविरुद्ध डिफ्यूजन नोटिस जारी January 22, 2018
मेट्रोका प्रहरी सहायक निरीक्षक ३ लाख घुससहित पक्राउ January 22, 2018
सरकारी सुविधा नलिने घोषणा January 22, 2018
बेलायतमा ग्लोबल आईएमई बैंकको सम्पर्क कार्यालय January 22, 2018
राष्ट्रपति भण्डारीबाट वसन्त श्रवण January 22, 2018
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा January 22, 2018